Seronegative Arthritis (Aretim-po Aretim-po)
21 / 06 / 2020 /i rheumatism/av loza
Ny aretin-tsaina dia aretin-tsaina vanim-potoana autoimmune, rheumatoid arthritis - fantatra koa amin'ny aretin-tratra rheumatoid. Ny aretina dia miteraka fanaintainana, fivontosana ary henjana amin'ny tonon-taolana. Misy karazany maromaro, anisan'izany ny aretin-kozatra seronegative sy seropositive. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia jerentsika akaiky ilay fiovana tsy fahita firy - ny aretin-kozatra seronegative. Izany hoe voan'ny vanin-taolana rheumatoid ilay olona - saingy tsy misy fiatraikany amin'ny fitsapana ra. Izay mety hanasarotra ny aretina.
- Aretin-tsaina Seronegative mifanohitra amin'ny Seropositive Rheumatic arthritis
Ny ankamaroan'ny olona voan'ny arthritis dia manana ny karazana aretika seropositive. Midika izany fa manana zavatra antsoina hoe "anti-cyclic citrullined peptide" (anti-SSP) antibody ao anaty rà, antsoina koa hoe rheumatoid factor. Ny dokotera iray dia afaka mamaritra ny fitiliana ny aretin'ny seropositive amin'ny alàlan'ny fitiliana ny fisian'ity fanafody ity.
Rehefa tsy manana ireo antibiôsy ireo ny olona voan'ny arteria dia antsoina hoe: aretin'ny seronegatif. Ireo izay voan'ny seronegatif arthritis dia mety misy antibiôtita hafa ao amin'ny vatana, na ireo fitsapana dia mety maneho fa tsy manana antibody hafa mihitsy izy ireo.
Na izany aza, azo atao ny mampisy antibiôsy amin'ny dingana taty aoriana. Raha mitranga izany, ny dokotera dia manova ny fizahana ny aretina amin'ny seropositive arthritis. Seronegative arthritis dia somary marefo lavitra noho ny seropositive arthritis.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hianatra bebe kokoa momba ireo soritr'aretina ianao sy ny safidy fitsaboana ho an'ny aretin'ny seronegatif.
Sintona ny Seronegatif Rheumatoid Arthritis
Ny soritr'aretin'ny aretin'ny seronegatif dia mitovy amin'ny hita ao amin'ny seropositive variant.
Anisan'izany ireto manaraka ireto:
Mampahory, mony ary mena ny tonon-taolana
Hentitra, indrindra amin'ny tanana, ny lohalika, ny kitrokeloka ary ny valahany
Mbola mafy mihoatra ny 30 minitra ny hamafin'ny maraina
Ny fivontosana / fanaintainana maharitra
Ireo soritr'aretina miteraka rashes eo amin'ny tonon-taolana eo amin'ny lafiny roa amin'ny vatana
Amin'ny dingana voalohany amin'ny aretina, ireo soritr'aretina ireo dia mazàna misy fiatraikany amin'ny tonon-taolana kely amin'ny tanana sy ny tongotra. Na izany aza, ny aretina dia hanomboka hisy fiatraikany amin'ny tonon-taolana hafa rehefa mandeha ny fotoana - satria mivoatra izy io. Ireo soritr'aretina dia mety miova ihany koa rehefa mandeha ny fotoana.
Ny manam-pahaizana sasany dia mino fa ny aretin'andoha ho an'ny aretin'ny seronegatif dia tsara kokoa noho ny gout seropositive. Mino izy ireo fa ny tsy fahampian'ny antibiôtsiaka dia mety ho famantarana fa ny aretin'ny seronegatif dia aretin-koditra mora kokoa.
Ho an'ny sasany, na izany aza, ny lalan'ny aretina dia mety hivoatra mitovy, ary indraindray ny fiovana dia miova ho seropositive rehefa mandeha ny fotoana. Azo atao koa ny manana olona arthritis seronegatif dia mety manana diagnosa hafa, toy ny osteoarthritis na psoriatic arthritis ao aoriana kely.
Fianarana iray (1) nahita fa ny mpandray anjara amin'ny aretim-bary seronegatif dia mora kokoa amin'ny fanatsarana ny ampahany noho ny amin'ny karazana seropositive, fa amin'ny ankapobeny dia tsy misy fiovana firy amin'ny fiantraikan'ny aretina roa ireo izay nanana azy.
Ny antony sy ny antony mampidi-doza
Misy aretina simika rehefa misy ny hery fanefitra diso tampoka amin'ny taolana salama na sela ao amin'ny vatana. Rehefa voan'ny aretin-kozatra ianao dia matetika mamely ny tsiranoka mivadika manodidina ny tonon-taolana. Mahatonga fahasimbana amin'ny ratra izany, izay miteraka fanaintainana sy fivontosana (sendikaly) amin'ny tonon-taolana. Amin'ny fotoana maharitra, ny fahasimbana lehibe amin'ny cartilage dia mety hitranga, ary mety manomboka miharatsy ny taolana.
Tsy fantatry ny matihanina ara-pahasalamana ny antony mahatonga izany, fa ny sasany amin'ireo voan'ny arteria dia manana antibody ao amin'ny rany antsoina hoe rheumatic factor. Azo atao fa mandray anjara amin'ny fivontosana ireo. Na izany aza, tsy ny olona manana arthritis dia manana an'io antony io.
Araka ny voalaza etsy ambony, ireo manana aretim-bary seropositive dia hizaha toetra tsara amin'ny antony rheumatic, fa ireo manana gout seronegatif kosa dia tsy. Ny mpikaroka dia mbola mandinika hoe nahoana ity no raharaha ary ny dikan'izany.
Misy ihany koa ny porofo marobe milaza fa ny tranganà aretina miteraka aretina mifandraika amin'ny havokavoka na vava - toy ny aretin'ny siligaoma - dia mitana anjara toerana amin'ny fampandrosoana ny aretin-tratra (2).
Ny olona sasany dia toa mora tavela handroso amin'ny artran'ny sasany. Ny anton-javatra mety hampidi-doza dia mitovy amin'ny seropositif sy ny seronegatif arthritis, ary ao anatin'izany:
Antony fototarazo sy tantaram-pianakaviana
Ny areti-mifindra amin'ny bakteria na viriosy manokana
Mifoka na mifoka amin'ny setroka faharoa
Fampisehoana amin'ny fandotoana rivotra sy ny simika ary mineraly sasany
Ny lahy sy vavy, satria ny 70% amin'ireo izay voan'ny arthritis dia vehivavy
Taona, rehefa mazàna no mivoatra mandritra ny 40 ka hatramin'ny 60 taona.
Na dia mitovy amin'ny karazany arthritis ny ankapobeny atahorana amin'ny ankapobeny, ireo mpanoratra ny fanadihadiana amin'ny taona 2018 kosa dia nanamarika fa ny hatavezivezy sy ny fifohana sigara no tranga mampidi-doza indrindra ao ambadik'aretina seronegatif, ary ny fisehoan'ny olona dia mamolavola karazana gout miankina amin'ny toetra fototarazo (3). Ny fikarohana dia nanolo-kevitra ihany koa fa ny olona voan'ny aretin-kozatra seronegative dia azo inoana fa manana tosidra ambony.
Ny fitsapana sy ny fitiliana ny aretim-bary Seronegative Rheumatoid
Hanontany ny olona momba ny soritr'ariny ny dokotera iray, ankoatra ny fanaovana fitiliana sasantsasany. Na izany na tsy izany, ny fitiliana ny rà izay manao fitsapana amin'ny trangan-javatra rheumatoid dia ho ratsy amin'ny olona manana aretim-bary seronegatif. Io dia mety hampahasarotra kokoa ny fizotran'ny diagnostika.
Raha misy soritr'aretina manondro ny aretin-tratra ny olona iray, ny dokotera dia afaka mamantatra ny aretina na dia tsy hita ao amin'ny rany aza ny rheumatoid. Amin'ny tranga sasany, azo inoana fa ny dokotera dia manoro hevitra ireo taratra X mba hahafahany mandinika raha nisy hainganana na haika nitranga teo amin'ny taolana na taolana.
Fitsaboana ny aretim-bary Seronegatif
Ny fitsaboana ny aretim-bary seronegative dia mifantoka indrindra amin'ny fanalefahana ny fivoaran'ny fepetra, ka manakana ny fanaintainana miaraka ary ny fanamaivanana ny soritr'aretina. Ny fampihenana ny haavon'ny ratra sy ny fiantraikan'ny aretina amin'ny vatana dia afaka mampihena ny mety hisian'ny aretim-po amin'ny ho avy.
Ny fanatanjahan-tena dia naneho ihany koa fa afaka mandrisika ny fiasan'ny anti-inflammatoire amin'ny vatana, ary amin'izany dia tafiditra ao anatin'ny fitsaboana manala soritr'aretina. Betsaka ny olona mahatsapa fa ny fanaovana fanatanjahan-tena maivana no tena mety - araka ny aseho amin'ity horonantsary eto ambany ity:
Aza misalasala misoratra anarana maimaim-poana ao amin'ny fantsona youtube ho an'ny programa fanatanjahan-tena bebe kokoa.
Ny sasany amin'ireo fanoloana azo ampiasaina mba hanamaivanana ny soritr'aretin'ny aretim-po dia ahitana zava-mahadomelina tsy mi-steroida (NSAID) sy steroid.
Ny fanaintainana mahazatra dia afaka mitsabo ny fanaintainana sy mamontsina rehefa misy fihanaky anao, saingy tsy misy fiantraikany amin'ny fizotry ny aretina izany. Ny Steroid dia afaka manampy amin'ny fitantanana ny fivontosana raha misy fihanahana na rehefa mafy ny soritr'aretina amin'ny sendika manokana. Mampalahelo fa be dia be ny lafiny ratsy, noho izany dia tsy tokony ho ampiasaina matetika ny steroida. Ny fampiasana fanafody rehetra dia tokony hiadian-kevitra amin'ny GP anao.
Mba hampihenana ny dingana izao
Ireo vahaolana natao hanalefahana ny fizotran'ny fepetra dia ny fanafody antirheumatic miabo (DMARDs) sy ny fitsaboana kinendry.
Ny DMARDs dia afaka manampy amin'ny fanalefahana ny fivoaran'ny arthritis amin'ny alàlan'ny fanovana ny fomba fihetsiky ny hery fiarovana. Methotrexate (Rheumatrex) dia ohatra amin'ny DMARD toy izany, fa raha tsy miasa ny zava-mahadomelina dia mety hanolotra fitsaboana hafa ny dokotera. Ny fanafody DMARD dia tsy manome fanamaivanana ny fanaintainana, fa manampy amin'ny fampihenana ny soritr'aretina ary mihazona ny tonon-taolana amin'ny alàlan'ny fanakanana ny fizotran'ny fanaintainany izay manimba tsikelikely ny fanaintainan'ny aretin'ny olona.
Diet ho an'ny aretin'ny seronegatif
Ny fandinihana dia nanolo-kevitra fa ny fandaniana sakafo dia afaka manampy amin'ny fitantanana ny soritr'aretin'ny arthritis. Na izany aza, ny olona manana ilay fepetra dia tokony hiresaka amin'ny dokotera alohan'ny hanandrana drafitra momba ny sakafo manokana.
Ny olona sasany dia misafidy ny hifikitra amin'ny sakafo fanoherana ny inflammato amin'ny fanamafisana ny sakafo mifototra amin'ny zavamaniry. Toa ny asidra matavy Omega-3 dia misy fiantraikany manohitra ny inflammatoire ary afaka manala fanaintainana sy hamafin'ny tonon-taolana. Ireo asidra matavy ireo dia azo avy amin'ny menaky ny trondro. Noho izany dia afaka manampy amin'ny fihinanana trondro misy rano mangatsiaka toa ny herring, salmon ary ny tanàna.
Ny asidra matavy misy omeo-6 dia hita ao anaty menaka katsaka, soja ary soja. Ny omega-6 be loatra dia mety hampitombo ny fihenan-tsoratry ny fihenan-tsasatra ary ny lanja lehibe
Ny sakafo hafa fantatra fa mampahatezitra ny fihanahana dia:
Hamburger, akoho ary hena na nifangaro tao anaty hena
Tavy, hena voadidy
Sakafo voapoizina sy sakafo efa vita amin'ny tavy saturated avo
Sakafo misy fary sy siramamy avo
Ny fifohana sigara sy ny tafiky ny alikaola dia mety hanalefaka ny soritr'aretin'ny arthritis.
Ireo mifoka sigara dia tokony hiresaka amin'ny dokoterany momba ny famelana sigara haingana araka izay azo atao. Ny fifohana sigara dia miteraka aretin'andoha ary mandray anjara amin'ny fitomboan'ny fitomboana sy ny fampivoarana haingana kokoa.
Ny olona voan'ny arthritis seronegatif dia manana soritr'aretina mitovy amin'ireo manana arthritis mahazatra, fa ny fitiliana ra kosa dia mampiseho fa tsy manana rheumatic amin'ny rany izy ireo. Ny mpikaroka dia mbola manao fikarohana ny antony mahatonga an'ity.
Ny fomba fijerin'ireo manana aretim-bary seronegatif dia toa mitovitovy amin'ny olona miova ny seropositif. Indraindray ireo fitiliana ra amin'ny ho avy dia mety manambara ny fitomboan'ny antony rheumatic amin'ny ra rehefa mandeha ny fotoana.
Afaka manoro hevitra ny dokotera hoe inona no fitsaboana tsara indrindra, fa ny fiovan'ny fomba fiainana toy ny sakafo mahasalama sy ny asa ara-batana tsy tapaka dia afaka manampy amin'ny fitantanana ny aretina.
Fanaovana fanafody manohitra ny aretina: Ahoana ny fomba hampihenana ny fanaintainana Autoimmune arthritis